Kubete - isinyathelo ngesinyathelo recipe ngezithombe
ikhekhe Tatar kubete, iresiphi zazo thina izokhipha kulesi sihloko kuvame uzilungiselele nge inyama namazambane. Ukubhaka uphendulela namanzi futhi simnandi kakhulu, ngakho ke ungase ufake ngokuphepha lesi sidlo etafuleni wentokozo.
Kubete. Recipe ngesithombe
Okusuthisayo Puff pie uqiniseke ukujabulela obathandayo. Ukuze wenze lokho, sizodinga kule mikhiqizo:
Umhluzi - 100 ml.
Izinongo, usawoti kanye pepper ukunambitha.
Amazambane - ezintathu.
Egg isikhuphasha for Lubrication - eyodwa.
Inyama - 500 amagremu.
Onion - izingcezu ezimbili.
Uviniga - omunye isipuni.
Imajarini noma bhotela - eyodwa iphakethe.
Ukhilimu omuncu - isigamu inkomishi.
Ubisi - isigamu inkomishi.
Indlela ukupheka yakudala Tatar kubete? Indlela Yokuphila Isikhathi ikhekhe okumnandi ungafunda ngezansi.
Khetha noma yiluphi inyama, sithembele ukunambitheka yakho siqu. Lungisa ke izocubungulwa, bese fake nquma. Salt futhi inkathi nge-pepper, uhlanganise kahle futhi beka in esiqandisini amahora ambalwa.
Ngemva kwalokho, lungiselela inhlama. Ukuze wenze lokhu, uthele endishini ezimbili izinkomishi ufulawa sifted uhlanganise ngayo yashizi usebenzisa indawo grater imajarini eqandisiwe noma bhotela. Grind ukudla ngezandla ku imvuthu.
Engeza endishini ubisi ukhilimu omuncu, futhi uviniga. Uxove inhlama, kancane kancane kokunezela kulo nendebe ufulawa. Sicela uqaphele ukuthi kuyoba ngowokuqala sidilike ezandleni zakhe, kodwa ke uqale banamathelane.
ukuhlolwa umngenisa ibhola futhi ulithumele efrijini ihora elilodwa.
kubete Classic ezenziwe Puff khekhe, ngakho kudingeka ukuba asebenze ucezu yethu. Ngakho, uma uye selehlile phansi (imizuzu engaba ngu-20), kususe esiqandisini futhi ukhiphe ibe ungqimba elincanyana. Songa ke imvilophu bese elithumela amakhaza. Phinda lesi sinyathelo izikhathi eziningana.
Ikhasi amazambane bese uthathe tincetu mncane kakhulu. Ungasebenzisa le njongo ummese ekhethekile noma ummese ukuze bahlanze imifino.
Anyanisi mahhala kusukela husk bese uthathe izindandatho uhhafu.
Thatha ezijulile baking dish futhi gcoba ke ngamafutha.
Hlukanisa inhlama ibe izingxenye ezimbili ukungalingani. A roll esikhulu kumbuthano, ngiyibeke phezu phansi efomini. Sicela uqaphele ukuthi amalunga yakho kufanele kube ngokwanele ngisho amabhampa.
Ungabese ukusakaza ukugcwaliswa. Okokuqala, wafaka inyama. Uma kuwukuthi mafutha kakhulu, noma usebenzisa inkukhu, ungakwazi ukwengeza izingcezu ezimbalwa ibhotela.
Eyesibili ungqimba baba amazambane - ke kufanele kube usawoti kanye pepper.
Isendlalelo zokugcina - is oqoshiwe anyanisi.
Unikezele ngezinsizakalo inhlama esisele bese ugcwalisa wabasondeza Phusha emaphethelweni. Phakathi wenze imbobo encane ngeminwe yakho.
Hlanganisa isikhuphasha neqanda ukuxubha ebusweni ikhekhe lakho kubo. I-plug imbobo nahlanza isibani.
Beka ikhekhe kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu 20. Lapho isikhathi esibekiwe sihamba, kufanele kube ukuze uthole phakathi uthele umhluzi. Vala Dome imbobo onion bese uthumela kubete emuva eziko. Obukwenza wokugcina isigamu sehora.
Uma ngemuva kwehora amazambane zimi ngomumo, ungengeza umhluzi, ukuvala pie nge ucwecwe ubhake ngakho isikhathi esithile. Toppings ungathola bese uyazama ngembobo isikhungo.
Kubete nge inkukhu. Step by step recipe izithombe
Lokhu okumnandi inyama pie kuba ukuqhosha litshwayo Tatar cuisine. Ngalesi sikhathi ukupheka inkukhu, amazambane, u-anyanisi futhi Puff khekhe. khekhe Ready ezenziwe iphendula namanzi, flavorful futhi eqotho. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga inhlama ngomumo eyenziwe esitolo, kodwa inguqulo ikhaya lo mkhiqizo ngeke kube tastier okuningi. Ngakho izithako sizodinga:
600 amagremu kafulawa kakolweni.
200 ml amanzi.
Omunye inkukhu neqanda.
Isipuni uviniga (9%).
300 amagremu inkukhu.
Isigamu isipuni nekhumini.
Isipuni sikasawoti kanye pepper ukunambitha.
ikhekhe Kubete, iresiphi thina uchaze ngezansi, iphekwe kakhulu ukumane:
Qoba ummese imajarini yiqhwa zaqina, bese ugaye ngayo 150 amagremu kafulawa ngesipuni sokhuni.
Phula endishini imvuthuluka amaqanda, engeza usawoti, uviniga namanzi.
Uxove inhlama kancane kancane kokunezela kulo asele 150 amagremu kafulawa. Khona-ke ulithumele efrijini kuze kuphele isigamu sehora.
Ikhasi anyanisi kanye namazambane, bese usika imifino 300 amagremu inkukhu cube futhi. Imikhiqizo ukuxhuma endishini enkulu, engeza usawoti kanye izinongo futhi uhlanganise.
Hlukanisa inhlama ibe izingxenye ezimbili bese unikezele ngezinsizakalo. I emikhulu isidleke endaweni ngezansi efomini kanye amabhampa abayizimpumputhe.
Beka ukugxusha futhi ngobumnene ukulolonga wakhe.
Ingxenye yesibili yesivivinyo walala phezu ikhekhe ngesimo ofeleba. Xhuma onqenqemeni wenze maphakathi umgodi isiyingi.
Coat ikhekhe nge amaqanda eshaywa futhi ulithumele kuhhavini ihora elilodwa.
Lapho kubete usulungile, kususe kuhhavini, cool kancane, usike uphake.
Ngokumangalisayo ikhekhe esihlwabusayo ocebile ingalungiswa ngeSonto wonke umndeni. Recipe kubete Puff khekhe ulula, ukuze ukwazi kalula ihlanganise ke ekhishini wakhe. Yiziphi izithako kudingeka? uhlu yabo ingatholakala lapha:
Onion - one piece.
Usawoti kanye pepper.
Ready ezenziwe Puff khekhe - eyodwa kilogram.
Lapha sizokubonisa indlela yokwenza Puff kubete. Recipe of the Tatar baking kazwelonke ulula:
Sika inyama ibe izicezu.
Unikezele ngezinsizakalo inhlama ungqimba encibilikisiwe, ngiyibeke phezu bhaka, lo isikhumba nikubeke ezinhliziyweni zenu.
Beka akunjalo ungqimba ezondile inyama, usawoti kuso futhi inkathi nge-pepper.
Onion izindandatho usike, ngiyibeke phezu ungqimba wokuqala.
Ikhasi amazambane bese uthathe tincetu mncane. Lokhu kuyoba ungqimba sesithathu - liphinde kulandela usawoti kanye pepper.
Roll ishidi inhlama lesibili, ngiyibeke phezu ukugcwaliswa. Tight Phusha imiphetho futhi phakathi wenze imbobo.
ikhekhe Bhaka kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu engu-40, ukukhumbula ukuthi ngezikhathi ezithile uthele ngokusebenzisa imbobo inkukhu umhluzi noma amanzi.
Siyojabula uma kuzodingeka ukunambitha kubete, iresiphi zazo ufundile kulesi sihloko. Pheka ke ngoba abathandekayo babo nsuku zonke futhi uqiniseke ukuthi inqubo ukupheka ngeke kuthathe isikhathi nomzamo omkhulu kakhulu.
Noodle "Wok" nge inkukhu nemifino: iresiphi. noodle Chinese
Uqweqwe ngoba Gingerbread indlu: iresiphi
Carrot amakhekhe - iresiphi (ukuzila ukudla)
Yamathenda indlebe salmon: iresiphi for emizi abasha
Indlela ukugcina utamatisi emafutheni ebusika
Yini ukwenza of inyama nengulube? zokupheka Excellent abadala kanye nezingane
Chloramphenicol (tablet) - imfundo manual
Kungani uphupha izitimela nokuhamba kuzo?
Levitan "Golden Autumn" - indaba ifilimu zesikole
Izimoto onga kakhulu: lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela ngemvelo futhi umnotho ngemali yayo siqu.
Le ndlela yokwenza yokufundisa isayensi kulolu cwaningo umfundi.
UMengameli wasePoland uLech Kaczynski: biography, umsebenzi wezepolitiki
Ukuvimbela amanzi ekugezeni ngaphansi kwe-tile - yini engcono? Idivayisi yokuvimbela amanzi, ukhetho lwezinto